Spain By Train: Ahoana no To Buy Tickets Ary More | Save A Train
Home > Travel Europe > Spain By Train: Ahoana no To Buy Tickets Ary More
(Last Nohavaozina: 26/02/2021)
Raha tapa-bolana mandany tany Espaina, iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana manodidina dia ny hijery Espaina lamasinina. Tsy izany ihany no hamela anao hahita zava mampino manerana ny firenena, fa lamasinina mandeha ao Espaina no tena mahomby sy mora. Ny sarotra indrindra dia ny mividy tapakila ny fiaran-dalamby. Ny fomba tsara indrindra mba hividy ny fiaran-dalamby tapakila mba handeha ho any Espaina lamasinina dia an-tserasera. Misy tranokala maromaro mamela anao hanao an'io. Ny fanalahidy dia ny mahita olona izay miasa tsara indrindra ho anao eo amin'ny lafiny aina ny fampiasana, fiteny, ary ny teti-bola. Mividy ny tapakila tany am-boalohany mamela anao haka tombony ny tahan'ny mety manokana ary koa ny fanaovana antoka fa mahazo ny fiaran-dalamby tao izay tianao ho tanteraka alohan'ny namandrika.
Mikasa mialoha ary manafoa mialoha ny tapakila hahazoana ilay tsara indrindra avy amin'ny fiaran-dalamby mandeha. Topazo maso ity tapa-bolana faritany haleha izy fa mandeha manodidina Espaina lamasinina. Aoka izany ho mpitari-dalana ho an'ny diany manaraka.
Ny voalohany Espaina lamasinina no Madrid (andro 1- 3)
Izany no Espaniola renivohitra ary dia tsara ny fifangaroana na Taloha sy Vaovao, amin'ny valan-javaboary kanto, tsy mampino fiantsenana, vibey Nightlife ary mazava ho azy ny Malasana faritra. Madrid an-trano ihany koa ny maro ny Espaina ambony tranombakoka. Maro ny trano asa fantatra iraisam-pirenena. Satria be dia be ny manao amin'ity tanàna ity dia ny 3 andro eto dia ho tsara nandany. Tsara fanombohana ny tapa-bolana lavitra sy mora ny hahazo lamasinina ho avy na aiza na aiza eto. Madrid Atocha no gara nizoran'i Renfe orinasa mpiasan'ny lalamby ofisialy, ary koa io gara io no iray amin'ireo tsara tarehy indrindra gara any Espaina.
San Sebastian (andro 3 - 5)
Io tanàna kely tsara tarehy dia ao Espaina ny Baska Firenena sy ny tsara eo amin'ny Bay ny Biscay. Manolotra sady tora-pasika sy ny tendrombohitra, izay mahazo ny sain'ny rehetra mandritra ny andro, fa rehefa tonga ny alina fa ny momba ny Old Town izay ianao dia ho afaka ny hanana am-polony maro pintxo barany ho tiany indrindra manaikitra-size vilia. Tandremo sao tsy mahita ny hariva mandeha niaraka Playa de concha mifarana amin'ny pintxos ao amin'ny Old Town. Mahazo an'i San Sebastian amin'ny Espaina lamasinina dia mora tahaka ny misy fiaran-dalamby efatra, fara fahakeliny, avy any Madrid isan'andro.
Pamplona (andro 5 – 6)
Ity tanàna ity no an-trano ny mampiady hevitra Mihazakazaka ny omby izay maka toerana ao amin'ny Jolay isan-taona, fa be dia be mihoatra noho izany ho Pamplona. Izany dia midika hoe toerana eo an-tampon'ny havoana anankiray ao amin'ny faritanin'i Navarre izany hoe misy fomba fijery mahatalanjona ny tendrombohitra sy lohasaha ambany. Ny tanàna kely izay no mahatonga azy mora ny mandeha manodidina, ary ento ao amin'ny trano tsara tarehy sy tantara. Misy dia mihetsiketsika fisotroana sy ny Tapas sehatra mandritra ny taona. Tandremo sao tsy mahita ny mandeha mamaky ny Old Town na Raha mandinika ny lalana nalaina nandritra ny hazakazaka ny omby. Farany, io vohitra io dia jerena ihany koa ny mora foana avy San Sebastian ary fohy mitaingina fiaran-dalamby lasa.
Espaina lamasinina – Barcelona Train (andro 6 - 9)
Ranomasimbe-tanàna io dia tsy maintsy ho ny iray amin'ireo malaza indrindra sy malaza tanàna any Espaina, ary tsy handiso fanantenana! Na mitady ny zavakanto sy ny kolontsaina, maritrano, kamo andro amin'ny tora-pasika, -alina ny antoko na trandrahana fotsiny ny tanàna vaovao, dia misy zavatra ho an'ny olona rehetra tao Barcelona. Tandremo sao tsy mahita ny Sagrada Familia, izay iray amin'ireo maoderina manaitra indrindra manerana izao tontolo izao rafitra. Espaina lamasinina manome matetika fiaran-dalamby avy any Pamplona ho any Barcelona, ​​ary tsy misy afa-tsy ny -efatra ora dia eo amin'ny tanàna roa.
Valencia (andro 9 - 10)
Fohy ihany Espaina mitaingina lamasinina avy any Barcelona, Valencia matetika odian-tsy hita ny mpizaha tany. Io tanàna kely dia manana betsaka hanatitra sy very maina izany naka ny andro mba hijery kely. Izany dia tanàna tsara tarehy handeha amin'ny alalan'ny ary manana mahatalanjona farihy ary mandeha lalana. Ho an'ireo mitady zavatra kokoa ny miala voly misy lehibe fifantenana ny torapasika sy Albufera Park. Tandremo sao tsy mahita ny mandeha, mihazakazaka na tsingerin'ny alalan'ny Turia Gardens – iray amin'ireo tanàn-dehibe lehibe indrindra zaridainam-panjakana tany Espaina. Maro ireo fiarandalamby izay mihazakazaka isan'andro avy any Barcelona ho Valencia.
Fampiarahana ny faritr'i Mediterane mihevitra amin'ny kolontsaina ny zavakanto maoderina sy ny fampandrosoana azo atao raha mandeha lamasinina Espaina, Malaga dia azo jerena ao amin'ny faritra atsimon'i Espaina ny Costa do Sol. Ny afovoan-tanàna no vao naverina tamin'ny laoniny sy ny Gothic Mitambatra katedraly sy ny mpandeha an-tongotra fahiny arabe tery amin'ny maoderina trano fisotroana sy trano fisakafoanana nahatapaka ranjo. Malaga dia manana tora-pasika ny sasany tena tsy mampino mba hitsidika sy Toerana mahafinaritra tendrombohitra manodidina azy io. Aza malahelo rehefa niakatra ho any amin'ny Gibralfaro Castle Fa fofonaina-naka fomba fijery avy ny asa lehibe Andulasian filentehan'ny masoandro sy ny tanàna. Misy fiarandalamby mihazakazaka isan'andro avy any Valencia ho Malaga.
ny https://www.youtube.com/watch?v = YNqMQz18HDM
Sevilla – Ny iray farany ny lisitry ny Espaina lamasinina
Seville ihany fohy mitaingina fiaran-dalamby avy any Malaga ary mahatalanjona toy ny. Eritrereto indray ny Fanjakana Romanina mba hahazo hevitra ny fijery sy hahatsapa tanàna ity izay singa Mitambatra vanim-potoana ara-tantara ny maro. Misy betsaka ny azo atao ao an-tanàna, tsy trandrahana ny tanàna teny an-Arenal mirenireny lafiny amoron'ony ny famangiana ny mahafinaritra ny trano fisakafoanana na mijery bullfight tao an-tanàna ny peratra ara-tantara. Tandremo sao tsy mahita ny fitsidihana Seville ny Katedraly sy Alcázar, izay nampiasaina mba haka sary sary avy amin'ny TV seho hira Game of ny seza fiandrianan'ny. Lamasinina mihazakazaka isan'andro avy any Malaga ho Seville sy Seville niverina tany Madrid izay misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia.
Ity faritany haleha izy tapa-bolana dia hanampy anao hanao indrindra ny dalana sy hijery Espaina lamasinina. Ny toro-hevitra amin'ny tapakila famandrihana fiaran-dalamby, dia ho antoka fa tratry ny ananany izay te handeha fa ny fety mihazakazaka hampandeha tsara mba afaka mahazo ny tenanao. Sady koa anie, izany Inona no fety dia ho an'ny!
Raha toa ka mila hafa European Train Tickets, tsindrio fotsiny Eto ary mandehana amin 'ny tranonkala, ary mankafy ny mitaingina.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / de na / ru sy ny maro hafa fiteny.
fiarandalamby Train Travel travelspain